सांसद अपहरणको नालीबेली यस्तो छ! | पहिलो बोली
सांसद अपहरणको नालीबेली यस्तो छ!
Published on: Friday April 24, 2020 (1 year ago)
ती २० घन्टा : सत्तारुढ नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ तथा पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालको बलमा रातारात काठमाडौं ल्याइएका पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले नयाँ पत्रिकाका नेत्र पन्थीलाई विस्तृत घटनाविवरण सुनाएका छन्:
अस्ति मंगलबार साँझपख आइजीसाब (पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई सांसद यादवले यो संवादमा सबै ठाउँ आइजीसाब भनेका छन्)ले फोन गर्नुभयो । डाक्टरसाब कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुभयो । गाउँ (महोत्तरी)को घरमै छु भनेँ । उहाँले भेट्नु थियो भन्नुभयो । ठीकै छ, लकडाउनपछि काठमाडौं आउँछु अनि भेटौंला भनेँ  । तर, उहाँले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट फोन गरेको छु, प्रधानमन्त्रीले तपाईंको सहयोग खोज्नुभएको छ भन्नुभयो । देशको प्रधानमन्त्रीलाई किन नभेट्ने, उहाँले सहयोग माग्नुभयो भने किन नगर्ने ? एउटा सांसदको रूपमा पनि उहाँलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य नै हो भनेर मैले जवाफ दिएँ । तर, अहिले त लकडाउन छ, खुलेपछि आउँछु भनेर दोहोर्‍याएँ । तर, उहाँले तपार्ईंहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने परिस्थिति अहिले नै आएको छ भनेर फोन राख्नुभयो ।
मैले उहाँहरूलाई भनेँ, ‘म प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे, पेसाले डाक्टर हुँ । राजनीति धेरै बुझ्दिनँ, सीधा कुरा गर्छु । तपार्ईंहरूसँग बहुमत छ, तर तपार्ईंहरूकै पार्टीमा धेरै विवाद छ । आफ्नो पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनहोस् । अरू सांसद तपाईंहरूलाई किन चाहियो ?’
तर, म पार्टी विभाजनको पक्षमा छैन, मलाई किन यहाँ ल्याएको भनेर उहाँहरू सबैलाई मैले सोधेँ । उमाशंकरजीले भन्नुभयो, ‘उपेन्द्र (यादव)ले जे गर्नुभएन, हामी गर्न सक्छौँ । हामी संविधान संशोधन गर्छौं, यसका लागि हामीलाई ११ जना सांसद चाहिन्छ । यो मिसन पूरा भयो भने मधेसमा हाम्रो प्रतिष्ठा बढ्छ । हामीले जस पाउँछौँ ।’ हामी एक–अर्काका कुरामा सहमत भएनौँ । त्यसपछि हामी जनकपुरतिर लाग्यौँ । मैले गाडीमै उमाशंकरजीलाई सोधेँ, ‘विभाजनको तयारी के गर्दै हुनुहुन्छ ?’ उहाँले बसेर सल्लाह गरौँ भन्नुभयो । तयारीकै लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने हो भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो ।
जनकपुरमा हामी डा. सूर्यनारायण यादवको घर पुग्यौँ । उहाँलाई मैले अप्ठ्यारोमा परेको र उहाँको घर आउँदै गरेको संकेत गरेको थिएँ । यो कुरा प्रदेश २ का गृहमन्त्रीसम्म पनि पुगिसकेको थियो । तर, प्रहरी त केन्द्र सरकारमातहत हुन्छ, उहाँहरूले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । बाध्य भएर काठमाडौं हिँड्नुपर्ने भएपछि मैले भिनाजुलाई पनि लिएर जान्छु भनेँ ।
हामी फ्रेस भएका मात्र थियौँ, आइजीसाब र माननीयहरू कोठामा आउनुभयो । भोलि बिहानै प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा जाने भन्नुभयो । मैले हुन्छ भनेँ । मैले एकछिन सुत्छु, निद्रा पुगेन भने बिरामी हुन्छु भनेपछि उहाँहरू आफ्नो कोठातर्फ लाग्नुभयो । मैले सुत्छु त भनेँ । तर, निद्रा कसरी लाग्नु ? मनमा कुरा खेल्न थाले । यिनीहरूले कल्लुदेवीलाई पनि अपहरण गरे । अब मलाई पनि जबर्जस्ती कागजमा हस्ताक्षर गराउँछन् र बर्बाद पार्छन् भन्ने लाग्यो ।
फेरि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरेँ । उहाँले तपार्ईं होटेलको सेरोफेरोमा बस्नुस्, गाडी आउँदै छ भन्नुभयो । नजिकै पिकअप गर्न गाडी आयो । गाडी चढेँ । बाबुराम र उपेन्द्रको योजनाअनुसार सुरक्षित ठाउँमा पुगेपछि मात्र लाग्यो– मलाई पार्टी विभाजनको मोहरा बनाउने खेल असफल पारिदिएँ । यो मेरो अथवा हाम्रो पार्टीको मात्र होइन, लोकतन्त्र र जनताको मतको पनि जित हो ।